हलिउड फिल्म खेल्दै दीपिका ! - inaruwaonline.com
हलिउड फिल्म खेल्दै दीपिका !
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २०, २०७२ समय: १७:००:२८
बलिउड आफैंमा ठूलो स्वप्ननगरी हो । तर, बलिउडकर्मीहरुको सपना पनि त्यो भन्दामाथि हुन्छ । धेरै बलिउडकर्मीहरु हलिउडको सपना देख्छन् । भलै, त्यस्तो सु–अवसर कमैको भागमा पर्छ । त्यसो त, बलिउडका केही अभिनेताले हलिउड फिल्ममा काम पाएका छन् । अभिनेत्रीहरुको संख्या भने कम छ । हालसालै प्रियंका चोपडाले टिभि सोबाटै भएपनि त्यसखाले मौका पाइन् । अब भने दीपिका पादुकोणले हलिउड फिल्म खेल्ने संकेत देखिएको छ । उक्त संकेत उनी आफैंले देखाएकी हुन् ।
उनले ट्विटरमा एउटा फोटो सेयर गरेकी छिन्, जसमा हलिउडका चर्चित अभिनेता विन डिजलसँग अँगालो मारिरहेको देखिन्छ भने पृष्ठभूमीमा ‘एक्सएक्सएक्स’ देखिएको छ । ‘एक्सएक्सएक्स’ सन् २००२ को चर्चित एक्सन फिल्म हो । जसमा विन डिजल मुख्य चरित्रमा थिए ।
बताइएअनुसार दीपिकाले यही फिल्मको फ्रेन्चाइजी फिल्ममा काम पाउन सक्नेछिन् । हाल रिलिज भइरहेको फिल्म ‘तमाशा’ को सक्सेस पार्टी सकेर फिल्मकै लागि विन डिजलसँग मिटिङ गर्न उनी अमेरिका गएकी थिइन् । उनले त्यहाँ पुगेर सो फोटो खिचाएकी थिइन् ।
जनाइएअनुसार दीपिकालाई यसअघि नै हलिउडबाट अफर आइसकेको थियो । विन डिजल स्टारर फिल्म ‘फाष्ट एण्ड फ्युरियस ७’ का लागि अफर आउँदा उनी ‘ह्याप्पी न्यु इयर’ मा व्यस्त भएकाले उनले सो अफर ताेड्नु परेकाे थियाे। सेताेपाटी बाट ।